डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो मौसम नीति उल्टाउन सक्छ! | नेटवर्क मौसम विज्ञान
डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो मौसम नीति उल्टाउन सक्छ!
यदि केहि दिन अघि हामीले मौसम विज्ञान नेटवर्कमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको फिर्तीको बारेमा वैश्विक मौसम परिवर्तनको प्रतिबद्धतामा लेखेका थियौं ... आज हामी यो स्थिति कसरी परिवर्तन हुन सक्दछौं भनेर लेख्ने छौं! र यो हिजो फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले प्रकाशित गरेको एक अन्तर्वार्तामा प्रकाश पारे। संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिसको भर्खरको भ्रमणमा उनलाई भने उसले सम्झौतामा आफ्नो देश फिर्ता लागि एक समाधान खोज्न को लागी हुनेछ.
म्याक्रोनले यो स्पष्ट पार्न चाहान्थे कि ट्रम्पको सम्बन्धमा "हामीले हाम्रो असहमति सहित सबै रणनीतिक मुद्दाहरूमा विश्वासको सम्बन्ध बनाउन सुरु गरेका छौं।" यो अन्यथा कसरी हुन सक्छ, ती मध्ये असहमति र अस्वीकृति पनि हो जुन ट्रम्पले संसारका प्रायः सबै देशहरुका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दाहरुको सम्झौताको बारेमा देखाए। म्याक्रोनले बताए कि कसरी डोनाल्ड ट्रम्पले उनीहरुलाई आतंकवाद र मौसम परिवर्तन बीचको सम्बन्धको बारेमा सुने। आश्वासन छ कि उनको कार्यको अर्थ बुझे र ट्रम्पले टिप्पणी गरे कि उनी समाधान खोज्ने प्रयास गर्दैछन् अर्को केही महिनामा
1 ट्रम्प समस्या बारे सचेत हुन थाल्छ
2 म्याक्रोनले खेलको बाहिर आफ्नो छाती लिन्छ
ट्रम्प समस्या बारे सचेत हुन थाल्छ
इमान्वेल म्याक्रोनले ट्रम्पले प्रमाणित गरेको सम्भावित सम्भावनाको बारेमा व्याख्या गरे। तपाईंको आफ्नै देशका सहरहरू, व्यवसायहरू, र तपाईंको आफ्नै वातावरणमा आन्दोलनहरू ताकि तपाईं जलवायु परिवर्तनको बिरूद्ध लड्न नछोड। म्याक्रोनको बारेमा विस्तार गर्न गए ट्रम्पसँग वार्तालाप कायम गर्ने महत्त्व। यो संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी ग्लोबल वार्मिंग को बिरूद्ध कार्य को एकीकृत गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। तपाइँ एक बहुपक्षीय गतिशील संग संलग्न हुन छ।
पछिल्लो बिहिबार प्रेस सम्मेलन पछि, ट्रम्पले भने कि उनको केहि नयाँ स्थितिको बारेमा केहि हुन सक्छ। उनले एक टिप्पणी दिए जुन फरक-फरक अर्थ भएको छ। हामी के हुन्छ हेर्नेछौं, तर समय आउँदा हामी कुरा गर्नेछौं। यदि केहि हुन्छ भने यो रमाईलो हुन्छ, र यदि केहि पनि हुँदैन भने त्यो पनि ठीक हुन्छ।
म्याक्रोनले खेलको बाहिर आफ्नो छाती लिन्छ
इमान्वेल पेरिस र फ्रान्स को एक मजबूत छवि देखाउन यात्रा को लाभ उठाउन चाहान्थे। उनी विश्वस्त छन् कि ट्रान्सको फ्रान्सको छवि अहिले राम्रोको लागि बदलिएको छ र अझ सकारात्मक छ। उनी भन्छन् कि यसै कारणले उनले आफ्नी श्रीमतीलाई पनि बेलुकीको खानामा निम्त्याउन एफिल टावरको माथिको रेस्टुरेन्ट छनौट गरे।
आशावादी र म्याक्रोनले भर्खरका कथनहरूले भरिएको यो अन्तिम बैठक पछि, राम्रो कुरा केहि हुन्छ भनेर भ्रमले ठूलो उत्साह गरायो।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो मौसम नीति उल्टाउन सक्छ!
मानव जातले सामना गर्न सक्ने अधिकतम तापक्रम के हो?